Hydraulic Breaker, Breaker Chisel, Ngaphakathi Bush-Monteono
Kit yokutshaja Gas
Amanye amalungu breaker hydraulic
Sizama konke okusemandleni ethu ukuxhasa inkonzo yangoku emva kokuthengisa kubathengi abasekhaya nakwamanye amazwe iimveliso zodidi lokuqalaFunda ngokugqithisileyo
Iimveliso zethu zinekhwalithi elungileyo kunye nekhredithi yokuvumela ukuba sikwazi ukuseta iiofisi zamasebe kunye nabasasazi kwilizwe lethu.Funda ngokugqithisileyo
I-ISO yethu iqinisekisiwe. kunye neemfuno zokhuseleko ze-CE.Funda ngokugqithisileyo
Hebei Monteono oomatshini Technology Co., ltd.
Sekuveliswe izando ngesando kubunzulu baphantsi komhlaba ngaphezu kweminyaka elishumi. Esi sisiqalo senkqubo egxile kukhuseleko kuyo yonke inkqubo
SOOSAN / FURUKAWA Series fracturing Breaker Kuba M ...
MES2500 MES3000 MES3500 MES4000 rock hydraulic ...
FURUKAWA HB1200 fracturing Breaker Tywina Kit Hamm ...
PC210 EX200 ngesanti kubunzulu baphantsi isando Breaker Excavator ...
Zonke iimodeli zoMgangatho oLungileyo wokutywina i-O-Ring Hydrauli ...
Izixhobo zoomatshini bendlela, zomelele kwaye zinxibe ...
Factory ngqo Thengisa SB81 hydraulic full break st ...
I-INDECO MES121 / 150 yokuTywina amaTywina okuHlanganisa iH ...
Ixabiso leMveliso loNyaka
YIYA Ngesandla ngesandla
Isabelo sentengiso yeRockbreaker Systems kulindeleke ukuba sikhule ukusuka kwi-2021 ukuya kwi-2024 inyuke kakhulu | Umbhali: Ubunjineli beDelta, i-Rock-Tech, i-Astec Australia, oomatshini bokwakha iWuxi Golink, iMcQu ...
Ngokwengxelo entsha ekhutshwe yiReports Monitor, isihloko sithi "Rockbreaker System Market: Uhlalutyo lwamathuba ehlabathi kunye noQikelelo lweMizi-mveliso ukusukela ngo-2021 ukuya ku-2027." Iimarike zixabiswa kwi-xx yezigidi zeedola zaseMelika kwi-2019 kwaye kulindeleke ukuba ifikelele kwi-xx ngo-2019 Isigidi esinye seedola zase-US. Ngo-2027, ukukhula komgangatho wonyaka ngexesha lokuqikelela yi-xx%. Eyona njongo iphambili yale ngxelo kukuqikelela ubungakanani beemarike zenkqubo yeRockbreaker kunye nokukhula okunokubakho kumacandelo ahlukeneyo entengiso kunye namacandelwana. Ingxelo ihlalutya ngokweenkcukacha ezona zinto ziphambili ezichaphazela ukukhula kweemarike, kubandakanya abaqhubi, iingxaki, amathuba enzuzo, imiceli mngeni ejolise kushishino, kunye nophuhliso lwamva nje. Abona badlali baphambili bagutyungelwe yile ngxelo: Inkampani yeCrusher Technology (BTI), O ...
I-Atlas Copco MB 1500 yongezwe kumgca wemveliso yabaphuli abaphakathi: i-CEG
I-MB 1500 ye-hydraulic breaker eqhotyoshelweyo ye-Atlas Copco Construction Tools Co., Ltd. yenzelwe iindawo ezimbalwa ezihambayo kwaye inokuthenjwa okungcono. Kukulungele ukuqaqa, ubunjineli bendlela, ukuntywila kunye nokuqhekezwa kwamatye asekondari. Iyunithi entsha idityaniswe neemodeli ezine ezikhoyo ukugqibezela uthotho lwe-Atlas Copco's medium-size hydraulic breaker. I-MB 1500 idibanisa amandla eempembelelo aphezulu kunye nefuthe lokuya kuthi ga kwi-640 ukubetha ngomzuzu, ngaloo ndlela kuphuculwe ukusebenza kokuchotshozwa. Ukongeza, ikhefu lesekethe elitsha lenzelwe izinto ezimbalwa ukunciphisa ulondolozo kunye nokwandisa ubomi benkonzo. Ubunzima bokusebenza ziipawundi ezingama-3,310 I-MB 1500 (1501 kg) ilungele ukuthuthwa kwezithuthi ezingama-18.7 ukuya kuma-32 eetoni (17 ukuya kwiitoni ezingama-29). Isityumzi yamkela ukungena hydraulic flow 32 ...
I-China ihowuliseyili China Excavator Attachment Parts Furukawa F35 Hb20g Hydraulic Jack Hammer Rock Concrete Breaker
I-EVOQUIP ibhengeze ukuqeshwa kweFJS Plant Repairs Ltd njengomhambisi ogunyazisiweyo eIreland. I-FJSPlant iya kubonelela ngeseti epheleleyo yezixhobo ze-EvoQuip, kubandakanya ukutyumka okuxineneyo, ukuhlolwa kunye nezixhobo zothutho; izixhobo original; nolondolozo loomatshini, kwilizwe liphela. Ngaphezulu kweminyaka engama-20, iFJS Plant ibiyinkokeli yentengiso kulo lonke elaseIreland kunikezelo, ulondolozo kunye nenkonzo yezityalo ezihambayo kunye nezixhobo zokwakha. Inkampani ineendawo zokusebenzela ezixhotyiswe kakuhle kunye neendawo zevenkile, kwaye ngoku inabasebenzi abangama-25. UFrank Smyth, uMlawuli oLawulayo weFJS Factory, uthe: “Siyavuya kakhulu ukusebenza ne-EvoQuip ukuxhasa abathengi eIreland. Uthotho lweemveliso ze-EvoQuip zincedisa iimveliso zethu esele zikhona, ezibandakanya uKwakha ...
Inkqubo yeCrusher yeNtengiso yeNtengiso, amaThuba kunye noQikelelo lweShishini 2021-2027 | I-Circuit Breaker Technologies (BTI), i-Osborne, iTramack, ubuNjineli beDelta
Los Angeles, e-USA: Uphando lwe-QY lubonise ukuba intengiso ye-Rockbreaker Systems 'kulindeleke ukuba inyuke ngesantya esothusayo kule minyaka imbalwa izayo. Ingxelo inesihloko esithi "I-Global Rockbreaker System Market Insights kunye noqikelelo kwi2027," kwaye ibonelela ngohlalutyo olubanzi lweemarike kwiphepha lalo. Iqala ngesishwankathelo sesigqeba, esibandakanya inkcazo kunye nobubanzi beemarike. Ichaza ngokufutshane iindawo ezinenzuzo kunye neemarike zommandla ophambili kurhwebo lwenkqubo yeRockbreaker. Ingxelo yeeNkqubo zeRockbreaker ikwabonelela ngoqikelelo lweemarike ngokusekwe kubalo oluchanekileyo. Fumana ikopi epheleleyo yesampulu yePDF yengxelo: (kubandakanya i-TOC epheleleyo, uluhlu lweetafile kunye neetshathi, iigrafu) -i-rockbreaker-systems-market-ityalwe ngabadlali abaphambili kwiRockbreak ...
I-Hammer ekhwelise i-excavator kwimisebenzi eyahlukeneyo isebenzisa
1, iteknoloji yokusebenza kwetekhnoloji Kuqala ukuqinisekisa imeko ejikeleze. Umsebenzi ojikelezayo, ujikeleze imiqobo, umhlaba owaziyo amanqaku, ukusebenza ngokukhuselekileyo; ukusebenza, ukuqinisekisa umkhondo wesikhokelo se-fore-and-aft, ukuphepha ukuthintela okanye impembelelo; zama ukunganikezeli okokugqibela ukuqhuba xa ujonge kwicala lezemigodi, kungenjalo kube lula ukonakalisa imoto okanye ithumbu; Ukusebenza, ukuqinisekisa umkhondo olungileyo kunxibelelwano olupheleleyo nomhlaba, ukwandisa uzinzo olunamandla kumatshini opheleleyo. 2, indlela efanelekileyo yokumbiwa kwemigodi Xa isilinda sebhakethi kunye nonxibelelwano phakathi kwentonga yebhakethi, isilinda kunye nentonga yebhakethi zinqumla kwii-90 degrees, amandla amakhulu okumba; amabhakethi amazinyo kunye nomhlaba kwi-engile degree 30, imigodi ngcono ukuba umhlaba ukusika ukumelana ubuncinci; ngokumbiwa kwentonga yebhakethi, ...
Isabelo sentengiso seRockbreaker silindele ...
Atlas Copco MB 1500 kongezwe imveliso ...
Ihowuliseyili China Excavator Attachment Pa ...
Iimpawu zeNtengiso yeNkqubo yeCrusher, amaThuba kunye ...
Sihlala ngqo ingcamango lweshishini ezikumgangatho elungileyo, igama eliphezulu, ukukhuthaza brand yesizwe.
Igumbi 1705, Vimba B, JINYE BUILDING, NO. INDLELA EZI-282 ZHUHE INDLELA YESITHILI SASHANSHAN, ISIXEKO SEHANDAN, EHEBEI